Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Xasuuqa Ogadenya (Ogaden Masscre Day) oo si Fiican Looga Xusay Xerada Dhagaxley
Maalinta Xasuuqa Ogadenya (Ogaden Masscre Day) oo si Fiican Looga Xusay Xerada Dhagaxley
Maalin nimadii Axada oo ay taariikhdu kubeegnayd 8/2/15 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay munaasabad aad ubalaadhan oo lagu xusayay Maalinta Xasuuqa Ogadenia (Ogaden Masscre day). Munaasabadan oo ahayd mid mid balaadhan si quruxbadana loo soo qaban qaabiyay ayay qorshaheeda iyo agaasinkeedaba lahaayee ururka OYSU faraciisa Dhagaxlay.
Munaasabada ayaa furantay abaare 2:00 duhurnimo xiliga Dhadhaab waxaana kasoo qayb galay intabadan xubnaha faraca Midnimo ee kahowlgala xerada Dhagaxlay iyo marti sharaf iyo waliba mas’uuliyiin katirsan JWXO. Waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soojeediyay Sh Aadan Macalim oo wacdi qiimo iyo qiiroba leh madasha shirka kasoo jeediyay. Sheekha ayaa ugu horaynba dadwaynaha xasuusiyay cabsida Allaah wuxuuna sheekhu aad ugu dheeraaday taariikhdii ay soomareen Rasuulkeenii Muxamed SCW iyo asxaabtiisii iyo dhibaatadii diinta islaamka lasoo mariyay iyo xasuuqii ay soomareen dadkii muslimiinta ahaa wuxuuna sheekhu dadkii munaasabada fadhiyay faray in ay u dulqaataan xasuuqa Ogadenia kasocda wuxuuna xusay haday samraan in ay gaadhi doonaan guusha kama dambaysta ah insha Allaah.
Intaas kadib waxaa lasii gudagalay munaasabadii wuxuuna xoghaya OYSU Dhagaxlay mudane Muuse Cismaan bilaabay kusoo dhawaynta mudanayaasha makarafoonka waxaana ugu horaynba madasha laga akhriyay waraaq taariikh ah oo ay OYSU Dhagaxlay ugu tala galeen munaasabada Xasuuqa Ogadenia oo laxuso sanadkasta bisha Febrayo oo ah bisha loo cayimay inay tahay bisha laxuso xasuuqa ogadenia. Waxaana dadwaynaha dhagahooda la maqashiiyay taariikhdheer oo kawaramaysay xasuuqa ba’an ee habeen iyo maalinba kasocda wadanka ogadenia iyadoo sigaar ah loosoo qaatay
dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee Ogadenia kadhacay sanadkii 1994 bisha Febarayo oo ay dhaceen dhacdooyin xanuunbadan iyo kuwo farxadeed oo ay gaadheen shacabka S.ogadenia.
Intaas kadib waxaa lagusoodhaweeyay xubin katirsan gudida fulinta ee OYSU heer caalam mudane Bashiir wuxuuna goobta kasoo jeediyay khudbad aad udheer oo uu kutaataabtay dhinacyo badan wuxuuna sikooban uga sheekeeyay OYSU iyo kaalinta ay kuleedahay soobandhigida tacadiyada kasocda ogadenia wuxuu sidoo kale kasheekeeyay sida ay uwada howlgalaan madaxda jabhada iyo ururka OYSU. Sidoo kale mudane Bashiir ayaa shahaado sharaf ay ku guulaysteen faraca OYSU Dhagaxlay. Gudoonsiiyay wuxuuna qeexay sida ay OYSU dhagaxlay uga guulaysatay
faracyada OYSU ee aduunka oo dhan wuxuuna sheegay in ay galeen kaalinta 1aad isagoo xoghayaha oysu dhagaxlay gacanta kagaliyay shahaadadii ay soo sameeyeen gudiga Fulinta ee OYSU heer Aduun wuxuuna u hambalyeeyay dhamaan faracyada OYSU ee bariga Africa gaar ahaan faraca Midnimo ee shahaadada qaatay.
Sidoo kale waxaa khudbado dhaxal gal ah soo jeediyay xoghayaha OYSU Xagardheere, gudoomiyaha qoxootiga ogadenia, mas’uuliyiin katirsan JWXO iyo waliba xubno kasocday urur hoosaad yada faraca Midnimo.
Intaas kadib waxaa lagusoo dhaweeyay kooxda Hilaac oo runtii soo bandhigtay suugaan iyo riwaayay katurjumaysay xasuuqa kasocda wadanka Ogadenia. Kooxda Hilaac oo looga bartay suugaan wada xigmad ah ayaa maanta soobandhigay suugaantii ugu qiira badnayd oo katurjumaysay xasuuqyadii isdaba jooga ahaa.